Ao amin'ity bilaogy ity dia hiresaka zavatra izay mahaliana ahy amin'ny asa.
Ny zavatra ataoko dia ny toro-làlana, tranga azo tsapain-tanana mikasika ny lohahevitra toy ny, automatisation office, fianarana fiteny, famokarana ary ny zava-drehetra izay mitodika amin'ny fampandrosoana matihanina.
Mianara manoratra tatitra iray, fifandimbiasam-pahefana ao amin'ny Word, mitantana mpiara-miasa sarotra ... Izany no lohahevitra izay nanapa-kevitra ny hiresaka ary izay antenaiko dia hamonjy anao amin'ny fotoana.
Mba hamonjena fotoana am-piasana sy any an-trano amin'ny alàlan'ny fanalalahana ny fiofanana tsy misy fiafarana sy tsy misy lohahevitra dia laharam-pahamehana ho ahy.
Misaotra ireo rehetra izay anisan'ny ekipa tsy ofisialiko aho ary manampy ahy hanolotra lahatsoratra mendrika aminao.
Na izany na tsy izany, miarahaba anareo aho ao amin'ny blaogiko, raha misy soso-kevitra na fanamarihana azoko atao? Aza misalasala manatona ahy.
Hijery anao tsy ho ela.